ढोरपाटन- ४ मा प्रशासनिक खर्च कटाएर स्वास्थ्य इकाइमा शौचालय निर्माण - ढोरपाटन पोष्ट
२०७७ फाल्गुन १४, शुक्रबार ०७:१२
ढोरपाटन नगरपालिका वडा नं. ४ ले, वडाको प्रशासनिक खर्च कटाएर स्वास्थ्य इकाईमा सुविधा सम्पन्न स्नानघर सहितको शौचालय निर्माण गरेको छ । हालै निर्माण सम्पन्न भएको स्वास्थ्य इकाईमा शौचालय निर्माणका लागि वजेट नभएपछि, वडा कार्यालयको सञ्चालन खर्च कटौति गरेर शौचालय निर्माण गरिएको वडा अध्यक्ष तिलक पुनले बताउनुभयो ।
नगरपालिकाबाट वडा कार्यालय सञ्चालन आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को ५ लाख वजेटबाट रुपैयाँ मध्येबाट ४ लाख २० हजार खर्चले शौचालय निर्माण गरिएको हो । स्वास्थ्य इकाईमा बर्थिङ सेन्टर सञ्चालन हुनेभएपनि, स्नान गृृह सहितको शौचालय अवश्यक अध्यक्ष पुनले बताउनुभयो ।
गत वर्षदेखि गाउँको घरमा सञ्चालन गरिएको स्वास्थ्य इकाई अहिले बर्थिङ सेन्टर सहित सुविधा सम्पन्न भवनबाट सेवा प्रवाह भइरहेको छ । गढडकी प्रदेश सरकारको १६ लाख ६३ हजार रुपैयाँ, ढोरपाटन नगरपालिकाको ५ लाख रुपैयाँ र स्थानीयको जनश्रमदानबाट निर्माण भवन निर्माण सम्पन्न भएको हो । दुर्गम स्थानमा स्वास्थ्य संस्था स्थापना भएपछि गाउँका जनतालाई सहज स्वास्थ्य सेवा आफ्नो पहुँचसम्म पुगेको स्थानीय गनबहादुर फगामीले बताउनुभयो । वडाको स्वास्थ्य चोकी जानुभन्दा, बुर्तिबाङ जान सजिलो हुने उहाँको भनाई थियो । अहिले गाउँमै सेवा प्रवाह भयो, सबैले सहज सेवा पाउँछन्, फगामीको भनाई छ ।
वडाको छोरेगाउँमा एउटा स्वास्थ्य चौकी छ । स्वास्थ्य सेवाका लागि लुकुरवन, फलामखानी लगायतका स्थानबाट पैदल हिंडेर ३ घण्टा लाग्ने गरेको फालामखानीका स्थानीय जीवन विश्वकर्माले बताउनुभयो । गाउँमै स्वास्थ्य भवन र सेवा सुरुभयो, हामी दुखी गरिवका लागि राम्रो काम भयो, खुसी पनि छौं, विश्वकर्माले भनाई थियो ।
खुँगाको धिरीमा निर्माणधिन स्वास्थ्य इकाईबाट प्राथमिक उपचार, चेकजाँच र प्रसुति सेवा समेत सञ्चालनमा आएको छ । प्रसुति सेवा सञ्चालन गर्न ग्रामीण स्वास्थ्य सुधार परियोजनाबाट २ लाख ३० हजार वरावरको उपकरण उपलब्ध भएको छ । दुर्गममा स्वास्थ्य सेवा विस्तार भएपछि स्वास्थ्य सेवाको पहँच सामान्य भन्दा सामान्य जनताको सहजतामा रहने, खुँगा स्वास्थ्य चौकीका डा. चन्द्रबहादुर विश्वकर्माले बताउनुभयो । विरामी भएपनि वा स्वास्थ्य समस्या भएपछि अस्पताल जनुपर्छ भन्ने जनतामा सचेतना अझैपनि कमी रहेको डा विश्वकर्माको भनाई छ । जनताको पहुँचमा स्वास्थ्य संस्था नहुँदा, यसको महत्व थाहा नहुनु स्वभाविक भएको उहाँले बताउनुभयो ।
सबै सेवा सहित स्वास्थ्य सेवा गाउँगाउँबाट सञ्चालन हुनेभएपनि अव जनताले पनि स्वास्थ्य संस्थामै पुगेर सेवा लिने विश्वकर्माको विश्वास छ । अव प्रत्येक वडामा ल्याव सेवा समेत विस्तार गर्नुपर्ने उहाँले सुझाव समेत दिनुभएको छ ।